Nyefee na Ndi ana-akpo si Nokia ka Android
Na-a ọhụrụ ekwentị dị mfe. Ma ebufe kọntaktị gị n'elu gị ngwaọrụ ọhụrụ a ga-adị nnọọ tricky ma na-ewe ma ọ bụrụ na ị na-adịghị nri ngwaọrụ. Ma, ọ bụrụ na ị nwere otu agadi nwa ọcha na Nokia ekwentị, nanị ụzọ nyefee gị kọntaktị bụ idetuo ha ka ha na kaadị SIM gị na mgbe ahụ re-edegharị ha ọhụrụ gị na ekwentị. Ọ bụ ezie na nke a ga na-arụ ọrụ n'ihi na ọtụtụ igwe, Ọ nwere ya mmachi. Ka ihe atụ, i nwere ike na-ebu naanị nwee 250 kọntaktsị na a SIM kaadị n'oge na oge a ụbọchị smartphones achọ kaadị SIM gị ga-ebipụ na kwesịrị ekwesị size ka ọ dabara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị na ekwentị nwere USB nkwado, nke o kwesịrị inwe, na-agụ na.
Effortless usoro nyefee kọntaktị (<10 mins)
Free usoro: Nyefee kọntaktị iji Nokia Suite (> 20 mins)
Effortless usoro nyefee kọntaktị
MobileTrans Si Wondershare ka ọ dị mfe, 100% mma na n'ihe ize ndụ free nyefee niile kọntaktị gị, oku na ndekọ, photos, videos, ngwa ọdịnala na music si Nokia ntị ka Android na ọtụtụ ndị ọzọ nyiwe nanị otu click. Niile ị chọrọ bụ kọmputa gị, gị Nokia na Android ngwaọrụ na MobileTrans software. Lee ndị nzọụkwụ ị pụrụ ịgbaso ime otú ahụ.
Wondershare MobileTrans - 1-Pịa Nokia ka Android DataTransfer
1. Tupu anyị na-amalite, ọ dị oké mkpa na ị na-eme n'aka na i nwere emelitere ngwaọrụ gị software ka ọhụrụ version site na ịga na Ntọala, About Phone, Software Update na mgbata Tulee maka mmelite.
2. Ị ga-ahụ ibudata na wụnye MobileTrans software na kọmputa gị.
3. Ọzọ, jikọọ gị ngwaọrụ abụọ site na eriri gị na kọmputa na-atụgharị na USB debugging mode na gị android ngwaọrụ.
4. Open elu Wondershare MobileTrans. Nke a bụ ndị kacha na ọtụtụ ọrụ-enyi na enyi na ngwaọrụ na ị ga-abịa gafee na ebe a bụ ihe mere. Ozugbo ị jikọọ ma ngwaọrụ ọma, usoro ihe omume ga-egosipụta isi iyi ekwentị na ekpe na onye nke data ga-agafere nri. Ị nwere ike iji tụgharịa button ịgbanwe isi iyi na ebe igwe. Niile data na ike ga-agafere n'etiti gị na ngwaọrụ ga-egosipụta na igbe n'etiti, dị ka e gosiri n'okpuru.
5. Nanị kaa data ị chọrọ agafere, ke idaha Ndi ana-akpo na pịa Malite Copy bọtịnụ.
6. ihe niile ị na-ahọrọ ga-agafere gị gam akporo ngwaọrụ na oge.
Ebe ọ bụ na ahụ dum usoro a rụrụ kpọmkwem site na ekwentị ekwentị gị, adịghị mkpa ọ bụla internet ohere, na-eme n'aka na ndị nile gị onwe ozi-anọgide onwe. Mwute ozi leaks bụ nanị agaghị ekwe omume na MobileTans.
MobileTrans-Enye gị ohere ndabere ekwentị gị data na faịlụ gị na kọmputa na Iweghachi ha bụ nnọọ dị mfe dị ka ịpị weghachi si ndabere window. Ọzọkwa mara na ọ bụrụ na ị nwere a Windows Phone, ị ga-mkpa mbụ ndabere kọntaktị gị ka OneDrive wee jiri weghachi si ndabere nhọrọ nyefee kọntaktị.
Tupu ị tụfuo, na-ere, ahia ma ọ bụ na-enye pụọ ekwentị gị, ị ga-ịrụ ụka adịghị chọrọ ihichapu niile data na ya mbụ iji gbochie ize ndụ nke njirimara-ezu ohi. Nanị resetting ekwentị gị na ụlọ ọrụ ntọala ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka nhichapụ agaghị na-adịgide adịgide-ebibi data. Data mgbake omume nwere ike ka na-eji na-esi gị ọmụma azụ. Nke a bụ ebe MobileTrans n'ezie shines. Ọ na-agụnye a mma ka na-adịgide adịgide-ehichapụkwa anya mmiri niile gị data iji US Military technology, na-eme n'aka na ọ na-apụghị natara na n'ụzọ ọ bụla o kwere omume.
Free usoro: Nyefee kọntaktị iji Nokia Suite
Ebe ọ bụ na ọtụtụ Java na Symbian Nokia igwe nwere USB nkwado, kọntaktị nwere ike mfe zigara gị Android ngwaọrụ eji Nokia Suite. Dị nnọọ na-eso nzọụkwụ depụtara n'okpuru:
1. Head ka Softonic.com na ibudata na Nokia PC Suite software
2. Wụnye usoro ihe omume
3. Malite usoro ihe omume na jikọọ na ị Nokia ekwentị Nokia PC Suite na iji eriri USB
4. Ugbu a, ịnyagharịa ka Kpọtụrụ menu na họrọ niile kọntaktị ị chọrọ nyefee
5. Pịa na File na mgbe ahụ Export
6. Họrọ a ọnọdụ na kọmputa gị ebe ị chọrọ ka chekwaa faịlụ na pịa Save
7. A ọhụrụ CSV faịlụ ga-kere ebe ị kpọmkwem
8. Iji nyefee faịlụ a ka gị gam akporo ngwaọrụ, anyị ga-eme ka ojiji nke Google Kpọtụrụ mmekọrịta ọrụ. Ya mere, na-emeghe gị Google akaụntụ na kọmputa gị
9. N'okpuru Kpọtụrụ menu, mbubata CSV faịlụ na ị dị nnọọ kere na kọmputa gị
10. On gị gam akporo ngwaọrụ, jide n'aka na ị na-ite na na otu Google akaụntụ nke ị uploaded na CSV faịlụ.
11. Gaa Ntọala, Akaụntụ & mmekọrịta na ego mmekọrịta kọntaktị
12. kọntaktị gị ga-ugbu a dị na gị ama na a okwu nke sekọnd
Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ bụ ezie na usoro a bụ free, e nwere ohere na gị data Nwela leaked na internet na hackers nwere ike iji ozi a maka obi na nzube. Ya mere, ọ na-ukwuu tụrụ aro na ị na-eji a software dị ka Wondershare MobileGo maka importing faịlụ gị gam akporo ngwaọrụ iji gbochie ọnwụ nke mwute ozi. Nke a bụ free software na-enye gị ka mfe jikwaa na hazie gị Android smartphone.
Ịgbanwee Data si Windows na ekwentị iPhone
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Windows Phone
Nyefee Android Data ka Windows Phone
Nyefee faịlụ site Blackberry ka WinPhone
Naghachi Photo si Windows Phone
Jiri VLC on Windows Phone
> Resource> Windows> Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Android effortlessly